ရွန္ ဟိုင္း သည္ ၂၀ ၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ ကား အစီးေရ ၁ ဒသမ ၂၅ သန္းေက်ာ္ အား သြင္း ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း ထား - Pandaily
ရွန္ ဟိုင္း သည္ ၂၀ ၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ ကား အစီးေရ ၁ ဒသမ ၂၅ သန္းေက်ာ္ အား သြင္း ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း ထား
Feb 24, 2022, 19:12ညနေ 2022/02/24 23:21:48 Pandaily
ရဲ့ရှန်ဟိုင်း မြူနီစီပယ် ပြည်သူ့ အစိုးရမှ ထုတ်ဝေ သည်ကြာသပတေး နေ့တွင် မြို့တော် အတွင်းရှိ မော်တော်ယာဉ် အားသွင်း ခြင်းနှင့် ဘက်ထရီ လဲလှယ် ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ များ ကိုမြှင့်တင် ခြင်း အကြောင်း ။ စည်ပင်သာယာ အစိုးရက ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ၁. ၂၅ သန်းကျော် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ရန် အသင့်အတင့် အဆင့် မြင့်သော မြို့ပြ အားသွင်း ကွန်ယက် ကိုဖွဲ့စည်း ရန်အဆိုပြုထားသည်။ ထို့အပြင် မြို့၏ မော်တော်ယာဉ် နှင့် အားသွင်း ပုံ အချိုးသည် ၂း၁ ထက်မပို ပါ။ စာရွက်စာတမ်း တွင်ဖော်ပြထားသော အတိုင်းအတာ များကို ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မတ်လ ၁ ရက်နေ့ တွင်စတင် အကောင်အထည်ဖော် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
စာရွက်စာတမ်း က အလေးအနက် ထား သည်မှာ အဓိကအားဖြင့် မော်တော်ယာဉ် အားသွင်း ခြင်း၊ ဘက်ထရီ အစားထိုး အခြေခံအဆောက်အအုံ များဖြင့် ဖြည့်စွက် ခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့် အငှားယာဉ် များ တွင်အသုံးပြုသည်။ အများပိုင် လိပ်ခေါင်း များဖြင့် ဖြည့်စွက် ထားသော်လည်း ပုဂ္ဂလိကပိုင် အားသွင်း လိပ်ခေါင်း များကိုပိုမို တည်ဆောက် သင့်သည်။ အနာဂတ် တွင်ပိုမို မြန်ဆန်သော အားသွင်း လိပ်ခေါင်း များ ကိုတည်ဆောက် လိမ့်မည်။ နှေးကွေးသော ဦး တည်ရာ အားသွင်း ခြင်းကို အဓိကအားဖြင့် ရပ်ရွာ လူထု တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ အများ ပြည်သူပိုင် in ရိယာ များတွင် လျင်မြန်စွာ အားသွင်း နိုင်သော အဆောက်အအုံ များ ၏အချိုးအစား မှာ ပိုမိုမြင့်မား လိမ့်မည်။
ထို့အပြင် အစိုးရသည် စမတ် အားသွင်း လိပ်ခေါင်း များ၏ တိုးတက်မှုကို အရှိန် မြှ င့ ်၍ ရှန်ဟိုင်း ရှိ အများပြည်သူ သုံး အချက်အလက် များစုဆောင်း ခြင်းနှင့် မြို့တော် အဆင့် ပလက်ဖောင်း အား အားသွင်း ခြင်းနှင့် အစားထိုး ခြင်း အဆောက်အအုံ များအား စောင့်ကြည့် ခြင်းအား အပြည့်အဝ အသုံးပြု လိမ့်မည်။ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ် သူများက အထောက်အကူပြု အဆောက်အအုံ များ ဆောက် လုပ်ခြင်း အတွက်တာ ၀ န်ယူ မှုရှိစေရန် မြို့ တော်သည် လူနေအိမ် များရှိ အားသွင်း လိပ်ခေါင်း များ ဆောက်လုပ် ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့် ခြင်း များပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စာရွက် စာတမ်းသည် ပါဝါ ဇယားကွက် အတွက် လိုအပ်ချက် များကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ရှန်ဟိုင်း သည် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များကို အားသွင်း ရန် စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် အသစ်များ အသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင် လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ် ၏အမြင့်ဆုံး နှင့် ချိုင့်ဝှမ်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များတွင် အကြီးစား နှင့် ဗဟို ချုပ် ကို င်မှု လျှော့ချ ထားသော EV အားသွင်း ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ် ခြင်း အရင်းအမြစ်များ ၏အခန်းကဏ္ play တွင်ပါ ၀ င်ရန် ဇယားကွက် ကုမ္ပဏီ များ၊ မြူနီစီပယ် ပလက်ဖောင်း များနှင့် အားသွင်း ကုမ္ပဏီ များအား ကူညီ လိမ့်မည်။ နိုင်ငံ ၏တရားဝင် ၁၄ နှစ် ငါးနှစ် စီမံကိန်း ကာလအတွင်း မြို့ တော်သည် စနစ်တကျ အားသွင်း နိုင်သည့် စွမ်းရည် ၅၀၀, ၀၀၀ နှင့် ကီလိုဝပ် ၅၀၀, ၀၀၀ ကိုတည်ဆောက်ရန် လုပ်ဆောင် နေသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ CATL သည် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ လဲလှယ် ရေး ဝန်ဆောင်မှု ကိုစတင် ခဲ့သည်
တရုတ် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် အားသွင်း ခြင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ မြှင့်တင်ရေး ကော်မတီ (EVCIPA) မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အကုန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၄. ၉၂ သန်းနှင့် အားသွင်း လိပ်ခေါင်း ၁. ၆ ၈၁ သန်း ရှိသည်။ ပုံ အချိုးသည် ၂. ၉း၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ လမှ နောက်ဆုံး အချက်အလက်များအရ တရုတ်နိုင်ငံတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၆. ၇၈ သန်း ရှိပြီး EVCIPA မှ ထုတ်ပြန်သော တရုတ် အားသွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ စုစုပေါင်း ၂. ၂ ၅၃ သန်း ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ယာဉ် ပုံ အချိုးသည် ၃း၁ တွင် တည်ငြိမ် နေပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္ အကုန္ တြင္ လွ်ပ္စစ္ ကား သစ္ မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ မႈ ရပ္ဆိုင္း မည္
တရုတ် အာဏာပိုင်များက ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ မူဝါဒကို တရားဝင် ရပ်ဆိုင်း လိမ့်မည်ဟု အတည်ပြုခဲ့သည်။
News Feb 22 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2022
NIO အိတ်ဆောင် အားသွင်း-ဥတု device ကို မိတ်ဆက်
တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူညို မြစ်လိုအပ်ချက် အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်း ရန် ခရီးဆောင် အားသွင်း-ဥတု All-in-one ကို တနင်္လာနေ့တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
တရုတ်အိမ်သုံးပစ္စည်းကုမ္ပဏီကြီး အမေရိကန်၏ စွမ်းအင်သစ်ထုတ်လုပ်မည့် ကားအစိတ်အပိုင်းများ
အေမရိကန္အေျခစိုက္ New Energy Automotive Group က ေၾကညာထားသည့္ (NEV) ကားေစ်းကြက္အတြင္း ကားအပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
Industry May 21 မေ 21, 2021